Cydia Impactor: esory amin'ny fitaovanao ny Jailbreak | Vaovao IPhone
Vaovao IPad | | Cydia, Fampianarana sy torolàlana
Tena tsy fahita izany Saurik mandefa fampiharana vaovao any Cydia ka rehefa misy izany dia miteraka fiatraikany lehibe, ary raha toa ka fampiharana mahasoa izaitsizy toa an'i Cydia Impactor dia vao mainka mainka. Ny mpamorona an'i Cydia dia namoaka tao amin'ny magazay fampiharana ity fitaovana vaovao ity izay dia hamela anao hanala ny soritry ny Cydia amin'ny fitaovanao, mamela azy io ho toy ny vao manomboka amin'ny ozinina miaraka amina rafitra miasa mitovy ary tsy mila famerenana amin'ny laoniny sarotra na fanavaozana ny fizotrany. Manome anao ny antsipiriany eto ambany izahay.
1 Fa maninona no esorina i Cydia?
Fa maninona no esorina i Cydia?
Mety ho hafahafa amin'ny maro ny hoe misy te-hamafa an'i Cydia amin'ny fitaovany, na misy fampiharana toa an'i Cydia Impactor natomboka rehefa mampifandray ny fitaovanao amin'ny iTunes ary manindry ny famerenana amin'ny laoniny dia nahavita ny zava-drehetra ianao. SAINGY misy antony maromaro mahatonga azy io hahasoa be.
Miaraka amin'ny Cydia Impactor dia avelanao haverina amin'ny laoniny ny fitaovana ampiasainao, satria nandao ny orinasa izy, tsy nisy sisa tavela tamin'ny Cydia, ny rindranasa na ny angona momba ny mpampiasa, fa tsy nanova ny kinovan'ny iOS. Raha nanana iOS 8.4 ianao, dia io dikan-teny io ihany no ho azonao amin'ny faran'ny fizotrany. Amin'ny iTunes dia afaka manao toy izany koa ianao, fa mametraka ny kinova farany apetrak'i Apple foana.
Ny fitazonana ny kinova ankehitriny dia midika fa afaka Jailbreak indray ianao amin'ny manaraka. Raha manavao ianao dia mety ho very io safidy io.
Vita avy amin'ny fitaovanao ny zava-drehetra, tsy mila mifandray amin'ny solosainao. Dingana tsotra toy ny fanindriana bokotra iray.
iOS 8.3 sy 8.4
Mifanaraka amin'ny fitaovana rehetra mihena ny iPod Touch 6G, izay mbola tsy misy fanavaozana amin'ny alàlan'ny OTA.
Manaova backup amin'ny fitaovanao. Ataovy ao an-tsaina fa ho very ny zava-drehetra: sary, fampiharana, angona ...
Ny fitaovanao dia tsy maintsy miambina miaraka amin'ny bateria mihoatra ny 20% tavela.
Raha manana safidy hahita ny iPhone miasa ianao dia tadidio izany Hangatahana aminao ny tenimiafin'ny kaonty iCloud mifandraika amin'ilay fitaovana aorian'ny famerenana amin'ny laoniny.
Sintomy ny Cydia Impactor avy amin'ny Cydia.
Tsindrio ny sary famantarana ny fampiharana izay vao niseho teo amin'ny solaitrabe.
Tsindrio ny "Delete all data and unjailbreak device" ary hamafiso indray eo am-baravarankely izay miseho.
Aza manao na inona na inona amin'ny fitaovanao mandra-pahatapitry ny fizotrany.
Raha vantany vao vita dia tsy maintsy ampifanarinao amin'ny fikororohana izy, toy ny hoe vao nesorinao tao amin'ilay boaty vao novidiny io.
Azo antoka fa mihoatra ny iray aminareo no mahalala fomba hafa, toa ny iLEX RAT o SemiRestore fa efa nasehonay anao tamin'ny tranga hafa. Na dia mitovy aza ny tanjony, Ireto safidy roa ireto dia mamela ny fitaovanao amin'ny alàlan'ny iOS misy anao ihany fa amin'ny Cydia napetraka, izany hoe mitazona ny Jailbreak.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Jailbreak » Cydia » Cydia Impactor: esory amin'ny fitaovanao ny Jailbreak
zenior dia hoy izy:
aorian'ny fampiasana cydia impactor dia afaka manao jb indray ve aho?
Mamaly amin'ny zenior
Naveriko tamin'ny laoniny ny iphone 4s amin'ny cydia impactor, naveriko tamin'ny laoniny ny backup ary rehefa averiko indray ilay iphone dia mivoaka indray aho raha te hampiasa ilay iPhone toa hoe vaovao na raha te hamerina kopia. IPhone, inona izany afaka manao ve aho?
Mamaly an'i Zenior
Inona no nomaninao nomaniny ho solon'izay? Avy amin'ny iCloud?
DIego Valenzuela dia hoy izy:
raha manao an'io aho ary mametraka ny backup, miverina ve ny jailbreak? Misaotra anao.
Valiny ho an'i DIego Valenzuela
Tsia, mila migadra indray ianao
Dia hijanona ny fangatahako rehetra fa raha ny jailbreak, sa tsy izany?
Raha ny marina, na dia tsy milaza aminao manokana aza aho ny hamerenana ny nomaniny ho solon'izay vita amin'ny Jailbreak amin'ny fitaovana iray izay tsy nahavita ny Jailbreak ... afaka manome olana maharitra izany
RoJ dia hoy izy:
Salama namana, lahatsoratra tsara! Nahagaga ny zava-drehetra! Hatreto dia te-jailbreak iPhone 4s amin'ny iOS 8.1 aho.
Mitranga izany fa manandrana mamaky trano miaraka amin'i pangu sy ny hafa aho fa raha avo loatra dia milaza amiko ilay kinova fa tsy afaka aho, raha ambany loatra izany dia milaza amiko fa efa lany andro ny iTunes no farany! Ka ahoana no hataoko mamaky fonja indray?
Valiny amin'i RoJ
Maxmiliano dia hoy izy:
namana manala ny jailbreak amin'ny impactor, afaka manavao ny iOS ve aho izao? Eo amin'ny 8.4 aho ary te hampakatra azy, sa tsy izany? sa hiteraka olana amiko?
Valiny tamin'i Maxmiliano
Fotsy fotsy dia hoy izy:
Ry namako, iOS 9.3.3 aho; Azoko atao ve ny mampiasa ny impactor hamerenana amin'ny laoniny ny findaiko tsy misy jailbreak?
Valiny tamin'i Victor Blanco